Machinery Pellet nke Biomass
Nri Pellet Machinery
Igwe na -akụpịa ihe
Ụlọ ihe igwe ihe
Pellet ngwa nju oyi
Ugboro abụọ aro igwekota
Mwepụ uzuzu Pulse
Nkwado & Ọrụ
Ekwentị: +86 13953111589
Okwu: No.666 Fengnian Road, Jinan City, Shandong Province, China
Igwe Kingel Biomass Pellet na 2021 ASEAN Expo
site na nchịkwa na 21-09-11
Na Septemba 10, emechiri ememme 18th China-ASEAN na Nanning, Guangxi. Ihe ngosi China-ASEAN ga-emejuputa ihe achọrọ nke “ịkwalite ntụkwasị obi atụmatụ, ịkwalite mmekorita akụ na ụba na azụmaahịa, ịkwalite ihe ọhụrụ na teknụzụ, na ịkwalite mmekorita ọrịa na-efe efe” iji kwalite ...
Asọmpi foto Shandong kingoro nke afọ 2021 kwụsịrị nke ọma
site na nchịkwa na 21-09-06
Iji mee ka ndụ ụlọ ọrụ baa ọgaranya wee too ọtụtụ ndị ọrụ, Shandong kingoro wepụtara asọmpi foto nke 2021 nke isiokwu ya bụ "Ịchọpụta Mma Dị Anyị gburugburu" n'August. Kemgbe mmalite asọmpi a, anatala ihe karịrị nde 140. Nke ...
Kedu onye na -asọmpi karịa n'ahịa n'etiti gas na osisi pellet pelletizer biomass pellet mmanụ
site na nchịkwa na 21-08-31
Ka ahịa pellet pelletizer osisi dị ugbu a na -aga n'ihu na -eto, enweghị mgbagha na ndị na -emepụta pellet biomass abụrụla ụzọ maka ọtụtụ ndị na -etinye ego iji dochie gas sitere n'okike iji nweta ego. Yabụ kedu ihe dị iche n'etiti gas na pellets? Ugbu a, anyị na -enyocha nke ọma ma tulee ...
Okwu Mmalite nke igwe ọkụ ọkụ pellet mmanụ biomass 1-2 ton/hour
site na nchịkwa na 21-08-27
Enwere ụdị 3 nke igwe pellet mmanụ biomass nwere mmepụta kwa elekere nke tọn 1-2, yana ike nke 90kw, 110kw na 132kw. A na -ejikarị igwe pellet maka mmepụta pellets mmanụ dị ka ahịhịa, sawdust na ibe osisi. Iji mgbali ala akara technology, na -aga n'ihu mmepụta c ...
Ngwa mmanụ pellet igwe na -achọ pellet agbawaala na mpaghara akụ na ụba ụwa
Mmanụ ala biomass bụ ụdị ume ọhụrụ emegharị emegharị. Ọ na -eji ibe osisi, alaka osisi, mkpị ọka, mkpị osikapa na ahịhịa osikapa na ihe mkpofu ahịhịa ndị ọzọ, nke ngwa igwe na -emepụta ihe ọkụkụ na -emepụta biomass mmanụ, nke nwere ike ịgba ya ọkụ ozugbo. , Nwere ike na -anọchite anya ...
Kingoro na -arụpụta igwe pellet mmanụ biomass dị mfe ma na -adịgide adịgide
Ọdịdị nke igwe pellet mmanụ biomass dị mfe ma na -adịgide. A na -ahụ ihe mkpofu ihe ọkụkụ na mba ndị a na -akọ ugbo. Mgbe oge owuwe ihe ubi na -abịa, ahịhịa nke a pụrụ ịhụ ebe niile na -ejupụta n'ubi ahụ niile, ndị ọrụ ugbo ewee kpọọ ya ọkụ. Agbanyeghị, nsonaazụ nke a bụ na ...
Kedu ụkpụrụ maka akụrụngwa na imepụta igwe pellet mmanụ biomass
Igwe pellet mmanụ biomass nwere ụkpụrụ achọrọ maka akụrụngwa na usoro mmepụta. Nnukwu akụrụngwa ga -ebute ọnụ ọgụgụ na -akpụpụta obere ihe biomass na ntụ ntụ, yana akụrụngwa siri ike ga -ebute nnukwu ihe eji eme ihe, yabụ nha nha nke mat ute ...
Ebumnuche carbon ugboro abụọ na-akwalite ọpụpụ ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahịhịa ahịhịa ruru ijeri 100 (igwe biolet pellet).
site na nchịkwa na 21-08-10
N'ịbụ nke atụmatụ mba nke "ịgbalị iru ọnụ ọgụgụ kacha elu nke ikuku carbon dioxide site n'afọ 2030 na ịgbalịsi ike nweta nnọpụiche carbon site n'afọ 2060", akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere kabeeji abụrụla ebumnuche mmepe nke ụdị ndụ niile. Ihe mgbaru ọsọ nwere carbon abụọ na-eme ka ọpụpụ ọhụrụ maka ahịhịa ahịhịa ruru ijeri 100 ...
A na -atụ anya na akụrụngwa igwe biomass pellet ga -abụ ngwa na -anọpụ iche carbon
Nnọpụiche carbon abụghị naanị mkpebi siri ike nke obodo m ịzaghachi mgbanwe ihu igwe, kamakwa ọ bụ amụma mba dị mkpa iji nweta mgbanwe dị mkpa na gburugburu akụ na ụba na mmekọrịta obodo m. Ọ bụkwa nnukwu atụmatụ maka obodo m inyocha ụzọ ọhụrụ maka mmepe mmadụ ...
Igwe pellet biomass na -akpụzi ihe ọmụma mmanụ
site na nchịkwa na 21-07-19
Kedu ka uru kalori nke briquettes biomass dị mgbe emechara pellet biomass? Kedu ihe e ji mara ya? Kedu oke nke ngwa? Soro onye nrụpụta igwe pellet ka ị lee anya. 1. Usoro teknụzụ nke mmanụ biomass: Mmanụ biomass sitere na ọrụ ugbo na fo ...
Akụkụ mmanụ ọkụ na -acha ọkụ ọkụ nke granulator biomass na -anọchi anya ike dị ọcha n'ọdịnihu
site na nchịkwa na 21-07-07
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ire pellets osisi sitere na igwe pellet biomass dị ka mmanụ ọkụ na gburugburu ebe obibi dị oke elu. Ọtụtụ ihe kpatara ya bụ na anaghị ekwe ka ọkụ gbaa n'ọkụ n'ọtụtụ ebe, ọnụ ahịa gas dị oke elu, ụfọdụ osisi ed na -atụfu ya.
Yangxin setịpụrụ igwe na -emepụta biolet pellet igwe na -arụpụta ihe ịga nke ọma
Yangxin setịpụrụ igwe na -emepụta biolet pellet igwe na -arụpụta ihe ịga nke ọma Ngwa akụrụngwa bụ mkpofu kichin, yana mmepụta kwa afọ nke tọn 8000. A na -emepụta mmanụ biomass site na mwepụ anụ ahụ nke granulator na -etinyeghị akụrụngwa kemịkalụ ọ bụla, nke nwere ike belata carbon dioxi nke ukwuu ...
123456 Ọzọ> >> Ibe 1/7
Igwe igwe Pellet Kingoro Biomass na 2021 AS ...
Foto Shandong kingoro igwe foto 2021 ...
Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị
Belt akwagharị Hammer Mill, Nri anụ ụlọ Pellet Mill, Ogige osisi Chippers, Pellet igwe na -eri nri anụmanụ, Igwe egweri N'ihi osisi, Onye na -akụ osisi,
Biko dejupụta mpaghara achọrọ.